Ekwentị gam akporo kacha mma: ule, ebupụta, asịrị ... | Gam akporosis
Chọrọ ịma ihe niile gbasara ekwentị ọhụrụ ndị dakwasịrị ahịa na gam akporo? Na-achọ igwe mkpanaka ọhụrụ ma chọọ inwe ozi ịhọrọ nke ka mma? Ebe ị ga-enwe ike ịnweta niile ozi banyere mobiles na iru ahịa na gam akporo. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịmatakwu banyere ha n'ụzọ dị mfe.
Akụkọ, nyocha ma ọ bụ nkọwa nke ụdị ekwentị gam akporo niile, site na ụdị ndị dị na ahịa, yana ndị nrụpụta ọhụụ na-abata na ụlọ ahịa. Na otu a, ị ga-enwe ike ịchọta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ekwentị ndị gam akporo a. Echefula otu n’ime ozi a.
Gịnị gam akporo mobile ịzụta?
Iji nyere gị aka ịhọrọ ọdịnihu mkpanaka gị, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ụfọdụ ntụzịzụ ịzụrụ ihe n'ime ya ị nwere ike ịhọrọ nke kachasị mma maka mkpa gị. Kedu nke ka amasị gị?
Ngwa igwe kachasị mma nke 2018
Top 10 mobiles nke 2017
The 10 kacha mma mobiles na ahịa
Ekwentị mkpanaaka maka ihe na-erughị euro 300
Mobiles kacha mma maka ihe na-erughị euro 200
China mobiles maka ihe na-erughị 100 euro
Dị ka njirimara ya si dị
Best mobiles na gam akporo Otu
Ekwentị nwere igwefoto kacha mma
Gam akporo igwe site na ika
Ọ bụrụ na ị doro anya banyere akara nke gam akporo gam akporo ọzọ gị, na ndepụta ndị na-esonụ ị ga-ahụ akụkọ kachasị ọhụrụ na mwepụta nke ụlọ ọrụ mkpanaka gam akporo kachasị mkpa n'ụwa.
Ndị a bụ ndị nrụpụta kachasị ama ama dị ka gam akporo gam akporo. Enwere ọtụtụ ndị nrụpụta, ọkachasị ndị China, mana n'otu ụzọ ndị a bụ ndị kacha ere ahịa n'etiti ndị ọrụ sistemụ mkpanaka Google.
More ozi ọma banyere gam akporo mobiles
por Onyeka Onwenu eme Ụbọchị 2 .
Huawei taa mara ọkwa ọkwa ọhụụ ọhụrụ P50 abụọ. A ga-enwe ọkọlọtọ abụọ maka ...
por Aaron Rivas eme Ụbọchị 2 .
Xiaomi amalitela ekwentị ọhụrụ n'ahịa maka mpaghara egwuregwu, ọ bụkwa Poco X3 GT….
Xiaomi amalitela onu ogugu ohuru ohuru n'ahịa, nke biara dika Redmi Note 10T. N'ebe ọwụwa anyanwụ…
Onye Asia na-emepụta Realme eguzobewo kemgbe ọtụtụ afọ dịka otu n'ime ụdị ndị kachasị mkpa, na-enye ụdị dị iche iche na ọnụahịa ...
Amazon Prime Day 2021 malitere site na ọtụtụ onyinye dị mma na teknụzụ, ụlọ na akpaaka ụlọ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ ...
Ngwaọrụ igwe na smartwatches na-ebuwanye ibu na ahịa, abụọ n'ime ngwaahịa ahụ bụ ...
por Ignacio Sala eme 1 ọnwa .
Enweghị ihe dịka sistemụ arụmọrụ zuru oke. Enweghi sistemụ arụmọrụ echekwara 100%. Sistemụ arụmọrụ niile nwere ike ịdị ...
Nweta Poco M3 Pro na ọnụahịa kachasị mma na nkwalite mmalite a
Pocophone abụrụla onye nrụpụta nwere ọtụtụ ngwaọrụ n'ahịa ndị a kwesịrị ịtụle site na ...
por Onyeka Onwenu eme Ọnwa 3 .
Ihe ngosi igwefoto ohuru kacha elu, Cubot X50, n'ikpeazụ a na-ere ya taa today.
Ọ dị mkpa ịnwe igwefoto dị mma na ekwentị mkpanaaka gị taa. Ọ bụ ezie na igwefoto smartphone adịghị otú ahụ ...
ZTE Axon 9 Pro bụ ọrụ: 6.21-inch AMOLED, Snapdragon 845, Android 8.1 Oreo na ndị ọzọ